China 201 ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili steel Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 201 Kuyashisa isongwe insimbi engagqwali ikhoyili , 201 HRC
Ukuqhathanisa okulula mayelana no-201 no-304
Emehlweni abathengi abaningi, insimbi engagqwali engama-304 nensimbi engenasici engama-201 kucishe kungahlukaniseki futhi akukwazi neze ukuhlukaniswa ngeso lenyama. Lapha sizokwethula ezinye izindlela zokwehlukanisa phakathi kuka-304 no-201.
1.Imininingwane: Amapuleti wensimbi angenasici asetshenziswa kaningi ahlukaniswe izinhlobo ezimbili zika-201 no-304, okwangempela ukwakheka kwekhwalithi enhle ehlukile, engu-304, kepha intengo iyabiza, 201 imbi kakhulu. Ezingama-304 zifaka amapuleti wensimbi angenasici angeniswe ngaphakathi nasekhaya, kanti u-201 uyipuleti lensimbi engagqwali yasekhaya.
Ukwakheka kwe-2,201 yi-17Cr-4.5Ni-6Mn-N, okuyinsimbi ehlukile yokonga i-Ni steel ne-301 steel. Kwenziwe ngozibuthe ngemuva kokucubungula okubandayo kwezimoto zesitimela.
Ukwakheka kwe-3.304 yi-18Cr-9Ni, okuyinsimbi engagqwali esetshenziswa kakhulu nensimbi emelana nokushisa. Okokukhiqiza ukudla, i-Xitong imishini yamakhemikhali, amandla enuzi nokunye.
I-4.201 ingukuqukethwe okuphezulu kwe-manganese, ingaphezulu liyakhanya ngokugqamile okumnyama, okuphezulu kwe-manganese ukugqwala kalula. I-304 iqukethe i-chromium eningi, ingaphezulu le-matte, aligqwali. Kunezinhlobo ezimbili zokuhlanganiswa. Okubaluleke kakhulu ukumelana nokugqwala okuhlukile, ukumelana nokugqwala okungu-201 kubi, ngakho-ke intengo izobe ishibhile kakhulu. Futhi ngoba i-201 iqukethe i-nickel ephansi, ngakho-ke intengo iphansi kune-304, ngakho-ke ukumelana nokugqwala akukuhle njengokufika ku-304.
5. Umehluko phakathi kuka-201 no-304 uyinkinga ye-nickel ne-manganese. Futhi inani lama-304 manje selibiza kakhulu, kepha okungenani ama-304 angaqinisekisa ukuthi ngeke ligqwale ngesikhathi sokusetshenziswa. (Sebenzisa i-potion yensimbi engenasici ukuzama)
I-6 insimbi engenasici akulula ukugqwala ngoba ukwakheka kwe-chromium oxide ebusweni bomzimba wensimbi kungavikela umzimba wensimbi, izinto ezingama-201 zinobunzima obuphezulu be-manganese insimbi engagqwali 304 ubulukhuni, ikhabhoni ephezulu ne-nickel ephansi.
7.Ukuhlanganiswa kuhlukile (ikakhulukazi kukhabhoni, i-manganese, i-nickel, i-chromium equkethe insimbi engagqwali engu-201 iye ku-304).
Langaphambilini 316Ti abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili
Olandelayo: 310s ashisayo insimbi engagqwali ikhoyili